I-China Traditional Chinese Medicine Loquat Leaf Ukwenziwa Nemboni | Bestop
Igama lesiShayina: pi pa ye
Igama lesiNgisi: Loquat leaf
Igama lesiLatin: Eriobotryae Folium
Sebenzisa Ingxenye: iqabunga
Umsebenzi oyinhloko: Ukuhlanza amaphaphu, ukukhulula ukukhwehlela, ukunciphisa ukusabela okungathandeki nokuyeka ukuhlanza
Iqabunga leLoquat igama lomuthi wendabuko waseShayina. Yiqabunga lika-Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Kunomphumela wokususa amaphaphu, ukunciphisa ukukhwehlela, ukunciphisa ukusabela okungafanele nokuyeka ukuhlanza. Izinkomba: ukukhwehlela ngenxa yokushisa kwamaphaphu, i-dyspnea, ukuhlanza ngenxa yokushisa kwesisu ne-dyspnea. Amaqabunga ayindilinga noma ama-obovate, angu-12-30cm ubude no-3-9cm ububanzi. I-Apex acute, i-base cuneate, imajini iserrate ngokuqhelelene, isisekelo siphelele. Ingaphezulu linombala oluhlaza ompunga, onsundu ophuzi noma onsundu ngokubomvu, liyacwebezela, bese kuthi indawo engezansi ibe mpunga ngokukhanyayo noma luhlaza okotshani, embozwe ngoboya obuphuzi. Imithambo eyinhloko iphakanyiswe kakhulu endaweni engezansi, imithambo ye-lateral pinnate. UPhethiole mfushane kakhulu, embozwe izinwele ezinsundu eziphuzi. Isikhumba futhi crisp, kulula ukugqashula. Ukunambitheka kuyababa kancane.
Ukususa amaphaphu, ukunciphisa ukukhwehlela, ukunciphisa ukusabela okungafanele nokuyeka ukuhlanza.
1. Ukukhwehlela ngenxa yokushisa kwamaphaphu kanye ne-dyspnea ngenxa ye-Qi inversion: ukunambitheka komunyu kungancishiswa futhi nemvelo yokubanda kungasuswa, enomsebenzi wokusula nokunciphisa i-lung qi.
2. Ukushisa kwesisu, ukuhlanza kanye ne-dyspnea: Lo mkhiqizo ungasusa ukushisa kwesisu, wehlise isisu qi futhi uyeke ukuhlanza kanye ne-hiccup.
3. Ukuxilongwa kwemithi yaseNtshonalanga ye-bronchitis ebukhali, i-lobar pneumonia, i-pertussis, i-bronchiectasis ingeyohlobo olushisayo lwe-phlegm, i-gastritis ebukhali futhi engapheli, i-spasm diaphragmatic ingeyomlilo wesisu.
1. Ukuhlanganiswa kwe-materia medica: "ukuvumelanisa isisu, ukunciphisa i-Qi, ukususa ukushisa, ukukhulula ukushisa kwehlobo, nokwelapha i-beriberi." Ngaphansi kweQi, umlilo uzokwehla futhi isikhohlela sizobushelelezi, kuyilapho labo abamelene nawo bengeke baphikisane nawo, labo abahlanzayo ngeke bahlanze, labo abomele ngeke bome, nalabo abakhwehlela ngeke bakhwehlele . "" Izifo zesisu, ijusi yejinja isetshenziselwa ukumboza, kanti ezifweni zamaphaphu, amanzi oju asetshenziselwa ukumboza. "
2. Ngokwe-eseyi kaChongqing Tang, "zonke izinto ezibangelwa amagciwane zomoya, ukushisa, ukushisa nokoma emaphashini zingasetshenziswa ukuvikela okuthambile negolide, kepha ukwelapha umkhosi, ngenkathi iphunga kodwa hhayi ukoma. izinto ezibangela ubumanzi, ubhadane nobuthi esiswini zingasetshenziswa ukusula uthuthuva nokufinyelela eZhongzhou. ". Umuthi wamakhambi, nokho, wasungulelwa impumelelo enkulu ekwelapheni ukukhwehlela nokuhlanzeka ngeQi ngaphansi kwawo.
Umlomo: i-decoction, 5-10g. Ukwehlisa ukukhwehlela, kulungele ukosa, futhi nokuyeka ukuhlanza, kufanelekile ukuhlala.
Kusukela ebusika kuye entwasahlobo elandelayo, lapho iziqu namaqabunga ebuna noma izimbali zingadonselwa, ziyaqoqwa futhi zimbiwe.
Susa ukungcola ne-fluff, fafaza ngamanzi, usike futhi womile.
Langaphambilini Imithi Yemvubelo Yendabuko Yemishanguzo YaseShayina
Olandelayo: Ulwelwesi Lwezinto Zokwelapha ZaseShayina Zesiko LeGizzard Yenkukhu
I-Traditional Chinese Medicine Semen Siz Spin ...
Isitolo esidayisa yonke impahla Of Traditional Chinese Medicine Figwort
Isitolo esidayisa yonke impahla Of Traditional Chinese Medicine China ...
Traditional Chinese zokwelapha Herba C ...
Isitolo esidayisa yonke impahla Of Chinese Herbal Medicine Puerariae ...